အကျိုးကျေးဇူး — Steemit
goldbloger3 (36)in #esteem •3years ago
အကျိုးကျေးဇူးများကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လိုက်နာမှုအရာရှိကပြောပါတယ်။ အလုပ်ရှင်များ၏% 35 အကြား 40% ကျေးဇူးတော်ကာလကိုဆက်ကပ်။ ကြွင်းသောအရာမှာ, သင်ရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးဖို့ဒီဇင်ဘာ 31 သည်အထိရှိသည်။ Next ကိုဖတ်ရန်: တစ်နှစ်တာ-End နောက်ဆုံးနေ့မီ FSA ငွေဖြုန်းဖို့ 42 နည်းလမ်းများ သတငျးကောငျးကိုသငျသညျဆေးဝါးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်ဖန်တီးမှုရနိုင်သည်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအပ်စိုက်ကုထုံးမှဆေးဝါးများနှင့်ဆေးရုံန်ဆောင်မှုမှတစုံတခုကိုဖုံးလွှမ်းပြီးဝန်ဆောင်မှုခွေးသင်တန်းပေး။ ယင်းအရည်အချင်းပြည့်မီကုန်ကျစရိတ်များအနက်ဒီမှာလာမည့်နှစ်တွင်အဘို့အသငျသညျဘတ်ဂျက်ကကူညီစေခြင်းငှါအများအပြားရှိပါတယ်။ ဤနေရာတွင် WageWorks '' အပြည့်အဝစာရင်းရှုပါ။
တောက်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းရန်လို့မရပါဘူး။ "ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးအကြောင်းကိုသိပ်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရမနေပါနဲ့" ဟုပေါလု Fronstin, အထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်သုတေသနအင်စတီကျုမှာကျန်းမာရေးသုတေသန၏ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ "သင်အခွန်အခများအပေါ်ကယ်တင်မည်မျှနှင့်သင်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းဘယ်လောက်အလေးချိန်ရန်ရှိသည်။ " သင်အစီအစဉ်ကိုဒီနှစ်ကုန်မှာသင့်ရဲ့ FSA အတွက်ပိုက်ဆံကျန်ရှိပါကသင်ကသုံးစွဲဖို့အပိုနှစ်ခု-and လခွဲယူ, ဒါမှမဟုတ်နောက်နှစ်ကူး $ 500 လှိမ့်ဖို့ဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်နှစ်ဦးစလုံး options နှစ်ခု (သို့မဟုတ်မ) ၏တဦးတည်းပူဇော်ပေမယ့်မရပါဘူး။ ပိုများသောအားလုံးအလုပ်ရှင်၏ထက်ဝက်ထက်ဖြုန်းတီးအသုံးစရိတ့်တားရန်အတွက်သယ်ကျော် option ကိုရွေးဂျိုဒီ Dietel, WageWorks, ထို 45,000 အလုပ်ရှင်များနှင့်အတူမိတ်ဖက်တစ်ဦးဝန်ထမ်း
သငျသညျထကျ 2016 ခုနှစ်တွင် $ 2,550 ကနေ 2017 တစ်ခု FSA ၌ရှိသကဲ့သို့အများကြီးအဖြစ် $ 2,600 ထားနိုင်ပြီး, သင်သည်သင်၏ပံ့ပိုးမှုများကိုမဝင်ငွေအခွန်ကြွေး။ $ 1,306 , မာစစ်တမ်းကိုသင် 25% အခွန် bracket က၌ရှိကြ၏လျှင်သင်အခွန်အတွက် $ 327 ကိုကယ်တင်မယ်လို့တွေ့။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ယခုနှစ်အစပိုင်းမှာတစ်ခုလုံးကိုအစီအစဉ်ကိုယခုနှစ်များအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်စေရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏လစာမှနုတ်ဖို့ဘယ်လောက်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားပြောပြီးတာနဲ့သင်ကငွေရှိသမျှကိုသင့်အကောင့်ထဲမှာဖွင့်ပြတော်မူပြီရှေ့တော်၌ထို FSA ရန်ပုံငွေများဖြုန်းစတင်နိုင်ပါသည်။ အားလုံးသင့်ငွေဟုဆိုကာများအတွက်အကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာ အဆိုပါအသိပေးချက်ကိုသင်ယေဘုယျအားဖြင့်အစီအစဉ်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းသင့်ရဲ့ FSA အတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းသို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေများ-တစ်ခု FSA ဒေါ်လာ $ 52 ပျမ်းမျှမာသည်နှင့်အညီ, unspent go ဆုံးရှုံးဖို့ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကျူးလွန်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်မိသားစု status ကိုအပြောင်းအလဲများကိုမဟုတ်လျှင်လုပ်ခလစာဖြတ်
500 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလုပ်သားများနှင့်အတူအလုပ်ရှင်များ၏ 87% အကျိုးအတွက်ပူဇော်နေစဉ်, အရည်အချင်းပြည့်မီန်ထမ်းကသာ 21% လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီအလုပ်ရှင်-စပွန်ဆာပေးထားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းများကို၏မာရဲ့ 2016 အမျိုးသားစစ်တမ်းအရသိရသည်ကြောင့်အားသာချက်ယူပါ။ VideoYOU အကြိုက်တွေ့နိုင် Play ကယ်လီဖိုးနီးယားပီဇာမီးဖိုချောင်ကို AT ပိုက်ဆံကယ်ဖို့နညျးလမျးငါးခု။ သငျသညျရှေ့စီစဉ်နှင့်သင့် FSA ခွင့်ပမာဏကိုခွဲဝေချထားပေးရန်လျှင်၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိသောအခွန်ချိုးပါပဲ။
ငျသညျနာရလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့လာသောအခါကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်မကြည်လင်ဘောလုံးကိုရှိပါသည်။ ဆရာဝန်လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့်ဆေးညွှန်းများအတွက် Co-ငွေပေးချေမှု, အဆက်အသွယ်အသစ်ကိုမျက်ကပ်မှန်များနှင့်မျက်မှန်နှင့်သွားများသန့်ရှင်းရေးအနည်းငယ်အမည်ကိုမှ: ဒါပေမယ့်သင်ကလာမယ့်မြင်နိုင်ပါသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုင်တွယ်ရန်ပိုကောင်းပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာအမြော်အမြင်ရှိရှိနှစ်ပတ်လည်နောက်ဆုံးနေ့ရှေ့တော်၌ထိုပိုက်ဆံဖြုန်းပြီးတော့အလုပ်နှင့်တစ်ဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးစရိတ်အကောင့် (FSA) တွင် Pre-အခွန်ဒေါ်လာ stash ။ ဤတွင်ဒီအခွင့်အရေးများ၏အများဆုံးလုပ်ပုံကိုပါပဲ။ Up ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲများအတွက်ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ဦး FSA နဲ့အတူသငျသညျဆေးဘက်သင်တို့အဘို့ကုန်ကျစရိတ်, သင့်အိမ်ထောင်ဖက်, 27 နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်အခြားမှီခိုမှုအတွက်ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
#good-karma #goldbloger #life #myanglish
3 years ago in #esteem by goldbloger3 (36)
Congratulations @goldbloger3! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
btsteemit (41)3years ago
ရမနေပါနဲ့" ဟုပေါလု Fronstin, အထမ်း
khine (41)3years ago
Congratulations @goldbloger3! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @goldbloger3! You receivedapersonal award!